Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyeeyay saraakiishii iyo askartii ku geeriyootay qaraxii Dhanaane – Gedo Times
class="post-template-default single single-post postid-49334 single-format-standard">
MenuHomeCiyaarahaEnglish NewsMaqaaloSomali NewsContact us
Boorama: Madax dhaqameed Ka Horyimid Xariga Masuul ka tirsan wasaaradda warfaafinta Somaliland
Dhageyso:Maxaad Kala socotaa Sababta Ciidamada Kenya Uha Baxayaan Jubbaland
Guddoomiye Tuulax oo xalay kormeeray hanaanka suggida ammaanka Degmada Wadajir
Daawo:Taliye indha Qorshe Inta Mudaharaadaysa waa dhumi doontaa wadanigana waa hari doonaa
Home / Wararka Maanta / Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyeeyay saraakiishii iyo askartii ku geeriyootay qaraxii Dhanaane
Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyeeyay saraakiishii iyo askartii ku geeriyootay qaraxii Dhanaane
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid Taliyihii, Abaanduulihii iyo askar ka tirsan Qaybta 12-ka Abriil ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed kuwaas oo ay miino dhulka lagu aasay kula qaraxday meel u dhaw deegaanka Dhanaane ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
“Innaa Lillaahi Wa Innaa Ileyhi Raajicuun. Anigoo ku hadlaya magaca Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo kaygaba, waxaan tiiraanyada la qaybsanayaa qoyskii, ehelladii iyo shacabka Soomaaliyeed ee ay ka shahiideen Taliyihii Qaybta 12-ka Abriil Marxuum Janaraal Cumar Aadan Xasan (Cumar Dheere), Abaanduulihiisii Marxuum Janaraal Cabdi Cali Jamaame iyo geesiyaashii kale ee la shahiidey.”
“Labada Janan iyo askartii kale ee ku shahiidday qaraxan waxay waqtigoodii iyo naftoodiiba u hureen soo celinta nabadgelyada dalkooda, waxayna dadaal badan galiyeen sidii Soomaaliya looga sifeyn lahaa kooxaha argagixisada ah.
“Waddaniyiintan naftood-hurayaasha ah waxaa lagu xasuusan doonaa kaalintii ay ka geysteen xoreynta deegaanno badan oo hoos yimaadda Gobolka Shabeellaha Hoose.” Ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa labada Janan iyo askartii kaleba Eebbe uga baryay in uu naxariistii Jannatul Fardowsa ka waraabiyo, qoyskii iyo ehelladii ay ka tageenna uu sabir iyo iimaan ka siiyo.
← Previous Story Daawo:Guddoomiyaha Gudidda Xalinta Khilaafaadka ee Gaas magacabay ayaa kahadlay Waxqabadkooda
Next Story → Daawo:Musharaxa Madaxwaynha Jubbaland oo Dignin udiray axmed madoobe iyo dhaliil u jeediyey dowlada Somaliya